Shiinaha Chongqing Warshad digaag basbaas leh iyo soosaarayaasha | Huikang
Chongqing Digaag Basbaas leh
Digaag basbaas leh ayaa ah cunnooyinka Sichuan ee caadiga ah. Guud ahaan, waxaa lagu sameeyaa digaag dhan sida walxaha ugu muhiimsan, oo lagu daray basasha, chilies qalalan, basbaas, milix, basbaas, monosodium glutamate iyo waxyaabo kale. In kasta oo ay tahay saxan isku mid ah, waxaa laga sameeyaa meelo kala duwan.
Digaaga basbaaska leh wuxuu leeyahay astaamo kala duwan sababtoo ah habab wax soo saar oo kala duwan oo meelo kala duwan ah, dadkuna aad ayey u jecel yihiin meel kasta. Cuntadani waxay leedahay midab casaan midab casaan dhalaalaya leh iyo dhadhan kulul oo basbaas leh.
Waa cuni karaan guud ahaan dadka, waana mid ku habboon waayeelka, bukaanka iyo kuwa itaalka daran.
1. Dadka qaba hargab iyo qandho, dabka gudaha oo sareeya, xaako culus iyo qoyaan, buurnida, dadka qaba finanka pyrogenic, dhiig karka, dhiiga badan, cholecystitis, iyo cholelithiasis waa inaysan cunin;
2. Digaaggu kuma haboona dadka kuleylka kuleylka ah, ka caawiya dabka, beerka 'yang yang', nabaad-guurka afka, finanka maqaarka, iyo calool istaagga;
3. Bukaanka qaba arteriosclerosis, wadna xanuunka iyo hyperlipidemia waa inay iska ilaaliyaan cabitaanka maraqa digaagga; kuwa qaba hargab ay weheliyaan madax xanuun, daal, iyo qandho waa inay ka fogaadaan cunista digaagga iyo maraq digaagga.
Digaaggu wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo borotiin ah iyo dufan yar. Intaas waxaa sii dheer, borotiinka digaaggu wuxuu qani ku yahay dhammaan astaamaha amino ee muhiimka ah, waxyaabaha ku jirana waxay aad ugu egyihiin muuqaalka amino acid ee ukunta iyo caanaha, sidaas darteed waa ilo tayo sare leh. 100kii garaam ee digaag aan maqaar lahayn waxay ka kooban tahay 24 garaam oo borotiin ah iyo 0.7 garaam oo dufan ah. Waa cunno borotiin sare leh oo aan lahayn dufan. Digaaggu sidoo kale waa isha wanaagsan ee fosfooraska, birta, naxaasta iyo zinc, wuxuuna hodan ku yahay fiitamiin B12, fiitamiin B6, fiitamiin A, fitamiin D, fitamiin K, iwm. Digaaga waxaa kujira asiidh dufan badan leh oo aan dhergin-oleic acid iyo linoleic acid (polyunsaturated fatty acids), taas oo yareynkarta dufanka yar yar ee lipoprotein cholesterol-ka, kaasoo waxyeelo u leh caafimaadka dadka.
Noocyada borotiinka ee digaaggu aad ayuu u sarreeyaa, waxaana si fudud u nuugaya ugana faa'iideysan karaa jirka bini'aadamka, kaasoo leh howsha kor u qaadista xoogga jirka iyo xoojinta jirka.
Xiga: Macaan Iyo Feeraha Fudud ee Fudud
Filimka hilibka lo'da ee Sichuan iyo Hunan
Digaag digaag Pao